Niakatrakatra ny fihetsehampo tamin'ny Alahady alina taorian'ny nanambaràna tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tany Venezoela. Nankalaza ny fitohizan'ny 'Revolisiona Bolivariana' teo ambany fitarihan'i Chávez ny ampahany amin'ny firenena, raha ny ankilany kosa natanondriky ny faharesena hafa indray tamin'ny fifidianana.
Ny orinasa mpanao fandalinana Oliver Wyman, izay mandalina ny hamafin'ny fototra ho an'ireo banky lehibe espaniôla, dia namoaka ho fantatry ny rehetra ny famintinana avy aminy: mila 50.000 tapitrisa Euro ireo banky mba hialàn-dry zareo ao anatin'izao toerana ara-toekarena mananosarotra misy azy izao. Mandalina ny toe-draharaha i Lourdes Sada ary...
Tontolo Arabo: Ny Anjara-ratsin'Ireo Vehivavy Mpitsoa-ponenana Syriana
Mpanoratra رامي الهامس · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Satria mbola mitohy ny Revolisiona Syriana, mitohy miantraika amin'ireo mpitsoa-ponenana ny herisetra tao amin'ny firenena hatrany ny voka-dratsin'izany [Revolisiona], ny vehivavy indrindra no tena mandoa avo roa heny ny voka-dratsin'ny ady noho izy ireo iharan'ny herisetra amin'izany ady mitam-piadiana izany. Amin'ny kolontsaina entina sy anjakazakan'ny lehilahy izay manararaotra tsy an-kiato ny...
Notsikerain'ny mpiserasera manerana ny tontolo Arabo ny kabarin'i Mitt Romney momba ny politika ivelany . Mitohy hatrany ny fanontaniana ao amin'ny Twitter mikasika ny politika ivelan'i Etazonia ao Afovoany Atsinanana, araka ny nambaran'i Romney [kandidà Repoblikana amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoavy izao] tao amin'ny Ivon-toerana Miaramila ao Virginia: Raha lany izy, dia vonona...
Misaona Noho Ny Fahafatesan'ilay Senatera Alonso Lujambio Ny Meksikana
Ny maraimben'ny 25 Septambra 2012, namoy ny ainy tao Meksika ny Senatera Alonso Lujambio Irazábal. Nitantana birao maromaro ity mpahay politika sy mpianatra ambony manana ny maha-izy azy teny amin'ny oniversité ity, ohatra tamin'izany: Efa Fakan-kevitra tao amin'ny Ivon-toerana Federalin'ny fidianana (IFE) izy; Mpanolon-tsaina misahana ny rafi-pifidianana ho an'ny Antenimieran-dalampanorenana ao Iràka tao amin'ny...